गोल्छाको प्रधानलाई साथ, चन्द्र ढकाललाई धक्का - Lokpath Lokpath
२०७६, १ फाल्गुन बिहीबार २२:०६
गोल्छाको प्रधानलाई साथ, चन्द्र ढकाललाई धक्का
प्रकाशित मिति : २०७६, १ फाल्गुन बिहीबार २२:०६
काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका किशोर प्रधानलाई वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले समर्थन गरेका छन् । प्रधानलाई गोल्छाको समर्थनपछि वरिष्ठ उपाध्यक्षका अर्का उम्मेदवार चन्द्र ढकाललाई धक्का लागेको छ । ढकालले पनि यसअघि नै उम्मेदारी घोषणा गरिसकेका छन् ।
गोल्छा दुई महिनापछि महासंघको स्वतः अध्यक्ष हुँदैछन् । महासंघको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान छ ।
बिहीबार बिराटनगरमा प्रधानको उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा सहभागी गोल्छाले अब आफू कसैको रबर स्ट्याम्प नबन्ने बताए ।
‘जब म नेतृत्व सम्हाल्दैछु, मेरो मनले भन्यो तिमी सबैको अध्यक्ष हुनुपुर्छ’ उनले चण्डीराज ढकालतर्फ लक्षित गर्दै भने, ‘तर जस्तो चितायो त्यस्तो नहुने रहेछ । हाम्रो पूर्वअध्यक्षले के भन्नुभयो भने शेखर एक्लैले के गर्छ ? सबै टिम मेरै आउने हो । उ मेरो लाइनमा हिँडेन भने ६ महिनामा पदमुक्त गरिदिन्छु ।’
उनले अघि भने, ‘अनि म नेतृत्वमा आएर रबर स्ट्याम्प बन्ने ? मैले काम गर्न सबल र बलियो टिम चाहियो, जसले महासंघको गिरेको शाख फिर्ता ल्याओस् ।’
प्रधान समूहलाई साथ दिनुको कारणतर्फ संकेत गर्दै उनले महासंघका काम गर्न टिम चाहिने बताए । गोल्छाले आफू अध्यक्ष भएको ६ देखि ९ महिनाभित्र विधान संशोधन गरेर सबैले चाहेको जस्तो बनाउने समेत बताए ।
‘आर्थिक लेनदेनमा लाग्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाही गरिने’
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले आर्थिक लेनदेनमा लाग्ने
विष्णु रिमालको नारायणकाजीप्रति कटाक्ष- ‘कम से कम पार्टी प्रवक्ता पदको लाज त जोगाउनुस’ !
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवाद चुलिएका बेला एक
काठमाडौं । कोरोना पोजेटिभ देखिएका सिरहाका एक युवकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु
राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षण स्थगित
कोरोना जोखिम बढेपछि उपत्यकामा कडाई गर्ने प्रशासनको निर्णय